Dowladda Somalia oo soo bandhigtey madaxii hore ee sirdoonka al-shabaab ee horey isu soo dhibey - Wargane News
Home Somali News Dowladda Somalia oo soo bandhigtey madaxii hore ee sirdoonka al-shabaab ee horey...
Madaxii hore ee Sirdoonka Al-shabaab Zakariye Ismaaciil Xirsi oo dhawaan gacanta u soo galay ciidamada nabadsugida dowladda federaalka ayaa maanta shir jaraa’id uu qabtay waxa uu ku sheegay in ka soo laabtay khalad uu sheegay in uu ku jiray wakhti horana uu iskaga baxa Al-shabaab hadana uu qaatay Nabada.
Zakariye ayaa sheegay in uu muddo ka hor isaga baxay ururka Al-shabaab ka dib sida uu sheegay markuu arkay in madaxda Al-shabaab ay ka weecden mabda’ii loo dhisay Al-shabaab, wuxuuna Al-Shabaab ku eedeyey in ay banaysteen dhiiga shacabka Soomaaliyeed iyagoon daliil u ahayn.
Wuxuu sheegay mar uu ka hadlayey sida ay ula dhaqmeen ciidamada dowladda federaalka xiligii la soo qabtay iyo hada oo uu gacanta ugu jiro ciidanka nabadsugida ayuu sheegay in uusan la kulmin wax dhibaato taasoo uu ku sheegay in ay meesha ka saartay fikirka ay Al-shabaab ka dhaadhiciyaan dhalinyarada ka soo baxaya.
Mar uu ka hadlay mustaqbalkiisa ayuu sheegay Zaskariye in hada ka dib uu fikirkiisa ku soo gudbin doono qaab waafaqsan shuruucda dalka isagoo ku celiyey in uusan marna qaab dagaal u soo bandhigeyn wuxuuna raja ka muujiyey dhismaha dowladnimo ee Soomaaliyo ku socoto in ay ka bixinayso dhibaatada shacabka.
Sidoo kale waxaa isna goobta shirka jaraaid ka hadlay siihaya xilka wasiirka warfaafinta Dowlad federaalka Mustaf Sh Cali Dhuxulow wuxuuna sheegay isagoo ku hadlaya magaca madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh in uu soo dhaweynayo ka bixitanka uu cadeeyey Zakariye oo horay u soo noqday madaxa sirdoonka Al-shabaab.
Dhamaadka sanadkii hore ayaa ciidamada dowladda federaalka ee gobolka Gedo Zakariye ka soo qabteen Magaalada Ceelwaaq oo uu markaa kuu dhuumaalaysanyey walow markii la qabtay uu sheegay in uu ujoogay sidii isku soo dhiibi lahaa.